Ngwa Factory - China Ngwa Manufacturers, Suppliers
Kapeeti ejiri aka mee
E Bipụtara Nylon Stock
Ogwe kapeeti na-abụghị nke ngwaahịa
Nylon 6.6 tile kapeeti
Tile kapeeti nylon
Rug na-abụghị nke ejiri aka mee
Kapeeti Sisal na-abụghị nke ngwaahịa
Rugs Cowhide ahaziri
Tile Kapeeti Ngwaahịa
Agba kapeeti kapeeti
Tile kapeeti nylon na -amị amị
Eyi Kapeeti kapeeti
Ngidi kapeeti nylon
Ngwa akpa akpa
Pịa SPC Plank- IXPE azụ
LVT Plank-gluu gbadara agbada
Arfù ahịhịa ahịhịa
Nwụnye na Mmezi
Ngwa ngwa maka ịdị ngwa
Akụkụ azụmaahịa bụ isi na-ekpuchi kapeeti, ala na ihe ụlọ ndị ọzọ, na-eje ozi ụlọ oriri na nkwari akụ kpakpando, ụlọ ọrụ ụlọ ọrụ ọkwa, ụlọ dị elu na ebe obibi. dị ka ọtụtụ ngwaahịa taịl kapet, SPC vinyl pịa plank nwere nkwado dị nro, ngwa kapeeti, wdg.
Ogbo Rubber Underlay Luxlay ™
LuxlayTM ejiri roba rọba mee, arụ ọrụ dị elu na mkpuchi mkpọtụ na mmịkọ. Ihe mkpuchi rọba bụ ụdịdị eji eme ihe n'okpuru. Ha nwere ntụsara ahụ nke ukwuu; ọ dịghị ihe mkpuchi ọzọ na -emepụta otu mmetụta ahụ n'okpuru ụkwụ. Ha dịkwa mma nke ukwuu n'ibelata ụda mmetụta na ụda ikuku n'etiti ụlọ. Rubber bụ ihe kachasị mma maka iji ya eme ihe n'ihi ihe a na-arụpụta site na nnukwu ọrụ, ebu na rọba na-eguzogide ọgwụ. Mkpuchi rọba rọba dabara adaba maka nrụnye kapeeti, dị na 6mm, 7mm, 8mm, 9mm na 10mm. Nke dị larịị bụ ihe mkpuchi rọba maka ala laminate. Ha abụọ bụ ihe mkpuchi rọba na -adọkpụ na n'okpuru rọba na -anaghị amị amị. Ihe mkpuchi rọba na -enye mkpuchi mkpuchi dị elu site na ikwu okwu loun, egwu na igwe onyonyo yana ihe ndị na -ada n'ala. Kedu ihe ọzọ, ihe mkpuchi rọba na -enye mkpuchi megide ala ala oyi. Ihe mkpuchi rọba na -adị ezigbo larịị ma ọ naghị agbagọ agbagọ.
Polyurethane Foam Underlay Soflay ™
SoflayTM bụ nke ụfụfụ polyurethane emegharịrị. Ihe mkpuchi mkpuchi kapeeti PU dị mma karịsịa na mkpuchi na mmetụta mbelata ụda yana ọfụma na ịdịte aka. Nke a na -eme ka ọ bụrụ ihe kachasị amasị maka mkpuchi mkpuchi kapeeti. Pu underlay dịkwa fechaa, yabụ ọ dị mfe iburu na dabara.
Felt Underlay-Firmlay ™
FirmlayTM chere kapeeti underlay bụ nke emere site na ọtụtụ nde eriri sịntetik emegharịrị emegharị na-enweta site na yarn kapeeti mkpofu ahihia, agịga na mkpakọ ya ruo njupụta kacha mma nke ga-enye nkwado kacha mma na kapeeti, na-enyere kapeeti ahụ aka idobe anya ọhụrụ ya ogologo oge. Ọ bụ ihe eji achọ mma kapeeti dị n'okpuru ka enyere iji nye mmetụta kwusị maka nkasi obi n'okpuru na nkwado ka mma maka kapeeti. Ngwaahịa a bụ ihe pụrụ iche n'ihi na emere ya site na eriri eriri sịntetị megharịrị emegharị nke a na-enweta site na yarn kapeeti creel-end na mkpakọ ya ka ọ bụrụ ọkpụrụkpụ nke na-agbanwe ihe ahụ ka ọ bụrụ mkpuchi mkpuchi ụda dị elu. Site na mmetụta kwusị okomoko yana ihe akụrụngwa na atụmatụ ndị ọzọ, Frimlay pụtara dị ka ezigbo mkpuchi maka kapeeti na ala osisi. Ụdị akwa kapeeti a dị ọcha, enweghị isi ma dịkwa ogologo. N'adịghị ka rọba ụfụfụ, ọ naghị emebi ma ọ bụ daa ka oge na -aga. Enwere ike ijigharị ya ọzọ mgbe edochiri kapeeti. A na-eme kwusị kapeeti na-enwu enwu site na ọtụtụ nde eriri sịntetị emegharịrị emegharị, nke a na-enweta site na yarn kapeeti mkpofu ahihia, agịga na mkpakọ ka ọ bụrụ njupụta nke ga-enye nkwado kacha mma na kapeeti, na-eme ka kapeeti ahụ nwee ike idobe anya ọhụrụ ya ogologo. Ihe mkpuchi a dị mma maka nnukwu okporo ụzọ ọkachasị maka okporo ụzọ ebe ọ bụla a na -ejikarị trolleys ọrụ na ebe ọha na -eme ihe. Ọ dabara maka usoro nrụnye mgbidi na mgbidi yana sistemụ mkpanaka abụọ. Kapeeti dị n'okpuru ala nwere ihe na -egbochi ire ọkụ. Ọ bụrụ na esure ya, ire ọkụ anaghị agbasa ma hapụ anwụrụ ọkụ dị ọcha megide anwụrụ ọkụ ojii na -egbu egbu na -apụta mgbe rọba na -ere ka ọkụ na -agbasa ngwa ngwa.
Plywood Carpet Gripper-Gripperstrip ™
A na -eji plywood poplar mee Gripperstrip to iji mee kapịpịa sie ike ma kwadoo ike n'oge nrụnye. Ọ nwere ike iji ụdị nnukwu ntu atọ: mbọ osisi, ntu ihe na mbọ abụọ nwere nzube. Ogo ọkọlọtọ bụ 1220mm/1520mm ogologo, 22/25/33/44mm obosara na ọkpụrụkpụ 6.3mm/7mm. 22mm/25mm obosara nwere ahịrị ntu abụọ ejiri maka paseeji na mpaghara ụlọ ọbịa yana obosara 33mm/44mm nwere ahịrị ntu atọ ejiri maka ebe ọha dị ka oriri, ụlọ bọọlụ.
Ogwe nrapado dị elu maka njikọ ụlọ ọrụ kapeeti ịnabata ọbụna nrụnye kapeeti kacha sie ike. Ejiri fiberglass kwalite maka ike agbakwunyere na mgbanwe yana ejiri akwụkwọ crepe silicone mesoo ya.
Teepu akwa akwa okpukpu abụọ-CRbonder ™
CRbonder ™ bụ onye na -ebu akwa dị elu nwere nnukwu mgbasa na -acha nchara nchara na -acha ọcha. Akwụkwọ mwepụta bụ akwụkwọ silicone dị mfe ịhapụ. Enwere ike iji ya na ụdị mkpuchi ala niile ọkachasị maka kapeeti na roket nwere Action back, Latex back and kpara azụ.
Kapeeti Kapeeti-Edgelock ™
Kapeeti ihu warara-EdgelockTM ejiri ezigbo aluminom rụọ ya iji mechie ọnụ kapeeti iji mee ka ala dị mma.
O nwere kicker na -ebugharị ebugharị ebugharị na nke dị mfe iburu igwe na -adọkpụ kapet.
Tilelock ™ dabara maka nrụnye taịlị kapeeti dị iche iche. Ọ na -anọchi ụzọ nrụnye kapeeti ọdịnala site na gluu. Ọ na -eme ka nrụnye kapeeti kapeeti dị mfe. Ihe kacha mkpa bụ izere mmetọ gluu iji mee ka ndụ bụrụ ahịhịa ndụ.
Mkpịsị osisi kapeeti
Ejiri ọla kọpa mee kapeeti steepụ, ihe anyị na -enye bụ nke siri ike, nke siri ike na -enweghị ụda na -adịghị mma.
Flat Ogbo Rubber Underlay Levlay ™
LevlayTM bụ nke rọba eke nwere arụmọrụ dị elu nke mkpuchi mkpọtụ. Ọ bụ ọkachamara maka ime ụlọ n'ime ụlọ nwere mmetụta ntụsara ahụ na mkpuchi mkpuchi ọkụ. Enwekwara ike iji Levlay jiri ogo tog dị ala maka iji ya na kpo oku dị n'okpuru ala. Ntụle tog dị ala na -ebelata ike mkpuchi ọkụ, yabụ na ọkụ nwere ike gabiga na -enweghị kpatara oke iwe. Ihe mkpuchi rọba bụ ụdịdị eji eme ihe n'okpuru. Ha nwere ntụsara ahụ nke ukwuu; ọ dịghị ihe mkpuchi ọzọ na -emepụta otu mmetụta ahụ n'okpuru ụkwụ. Ha dịkwa mma nke ukwuu n'ibelata ụda mmetụta na ụda ikuku n'etiti ụlọ. Rubber bụ ihe kachasị mma maka iji ya eme ihe n'ihi ihe a na-arụpụta site na nnukwu ọrụ, ebu na rọba na-eguzogide ọgwụ. Mkpuchi rọba rọba dabara adaba maka nrụnye kapeeti, dị na 6mm, 7mm, 8mm, 9mm na 10mm. Nke dị larịị bụ ihe mkpuchi rọba maka ala laminate. Ha abụọ bụ ihe mkpuchi rọba na -adọkpụ na n'okpuru rọba na -anaghị amị amị. Ihe mkpuchi rọba na -enye mkpuchi mkpuchi dị elu site na ikwu okwu loun, egwu na igwe onyonyo yana ihe ndị na -ada n'ala. Kedu ihe ọzọ, ihe mkpuchi rọba na -enye mkpuchi megide ala ala oyi. Ihe mkpuchi rọba na -adị ezigbo larịị ma ọ naghị agbagọ agbagọ. Ọ bụ ngwaahịa kachasị elu nke ime ụlọ.
Polyethylene Foam Underlay Ecolay ™
Ecolay nwere EPE underlay, EVA underlay, IXPE underlay nwere usoro afụ dịpụrụ adịpụ iji hụ na arụ ọrụ nke nrụpụta ọkụ dị ala yana mkpuchi mkpuchi ọkụ dị elu. EPE bụ isi ihe na -ewu bụ ụmụ irighiri plastik polyethylene. EVA underlayment/EVA ụfụfụ underlayment isi akụrụngwa bụ EVA.2mm na 3mm EVA underlayment na -ewu ewu na -eji maka flooring underlay. IXPE isi akụrụngwa bụ ụfụfụ nwere njikọ. N'elu ụfụfụ ụfụfụ atọ bụ ihe na -adịghị mma maka ala ụlọ, nke bụkwa mkpuchi mkpuchi ala dị n'okpuru. Ihe mkpuchi ala nke nwere ihe mkpuchi aluminom na -enye arụmọrụ dị mma n'ichebe ala ụlọ site na mmiri na -esite na ihe. Lumate flooring underlay mmetụta ụda insulaiton na mkpuchi mkpuchi ọ dịkwa mma maka ikpo ọkụ dị n'okpuru ala.
B302, No.2588 South Hongmei Road, Shanghai, China (Koodu Koodu: 201108)